Ubuntu MM – Page2– Ubuntu : Linux For Human Being
16/06/2015 16/06/2015 kokoye2007 
Department of Meteorology and Hydrology – Ubuntu Class
10/02/2018 10/02/2018 kokoye2007 
Steam and Dota2 on ubuntu
02/10/2015 02/10/2015 kokoye2007 
Ubuntu-MM Core Member
Event Featured News Ubuntu ubuntumm
15/10/2019 15/10/2019 kokoye2007 
Ubuntu 19.10 Code Name – Eoan Ermine လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Version အသစ်ဟာ ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့ မှာ stable ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Beta Version ကို စမ်းသပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ISO Download ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ယခု Update မှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Feature များကတော့ Faster boot Ubuntu 19.10 မှာ LZ4 compression algorithms ကို သုံးထားလို့ Booting time ဟာ အရင် version များထက် ပိုမို မြန်ဆန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GNOME 3.34 GNOME 3.34 မှာ […]
Tagged 1910, Eoan, Eoan Ermine, feature, gnome, Release Party, ubuntu, ubuntu-mm, ubuntumm	Discover
Event Knowledge LoCo News News
14/10/2019 15/10/2019 zawyelwin
Ubuntu 19.10 Release Party (Yangon)
ဧပြီလနှင့် အောက်တိုဘာလတို့တွင် အသစ်ထုတ်ဝေလေ့ ရှိတဲ့ Ubuntu တိုင်းကို ကမ္ဘာ တဝမ်းရှိ Ubuntu user များမှ စုပေါင်း၍ Release Party ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ်ဝေမှာကတော့ Code name >> Eoan Ermine << လို့ခေါ်ပါတယ်။ Desktop Version ကို ၉လ အထိ အထောက်အပံ့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ယခု ထွက်ရှိလာတဲ့ version အသစ်မှာ ဘယ်လို features တွေပါလာမလဲ? ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲ လေးတွေ တွေ့ရမလဲ? ဆိုတာကို Ubuntu Myanmar LoCo team နှင် အတူ ဆွေးနွေး ဖို့ Ubuntu 19.10 […]
Tagged 19.10, Linux, Release, ubuntumm	Discover
14/07/2019 14/07/2019 kokoye2007 
Debian 10 Buster Report (Personal Blog)
Debian 10 (buster) ကို တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ release လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေကြားက သည်လိုမျိုး ဖြစ်လာအောင် အလုပ် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တဲ့ လူတွေအများကြီး ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်နေရတာဟာ အင်မတန်မှ အံ့အားသင့်စရာပါ။ Stable release တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပြီး အထောက်အပံ့ ပေးရတာဟာ အင်မတန် ရှည်ကြာပြီး ပျင်းရိဖွယ် အလုပ်တစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့် stable release တစ်ခုက ဘယ်လို အကြီးစား သို့မဟုတ် ရေရှည် deployment မျိုးအတွက်မဆို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ယခု release ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အသေးလေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတာတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူမိရ ပါတယ်ဗျာ။ Debian Live ယခု release အတွက် […]
15/06/2019 15/06/2019 kokoye2007 
LibreOffice သုံးမယ်ဆိုရင် အရမ်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ အသုံးများနေကြတဲ့ Microsoft Office နဲ့ တန်းတူ အစားထိုး သုံးလို့ရတဲ့ အခပေး အခမဲ့ Office များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အကုန်လုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရင် Libre Office က အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ လိုင်စင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုင်စင်ခကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် OS မရွေး သုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် LibreOffice ဘက်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုပါစို့ ၁) သူ့အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို အွန်လိုင်းကနေ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ မထူးဆန်းသလိုထင်ရပေမယ့် တကယ်တန်း တခြားသော Office Suite တွေအတွက်ဆို ဒါမျိုး ပြည့်စုံတာ အခမဲ့ရတာ ၂ ခုလုံး အဆင်ပြေတာ ရှားပါလိမ့်မယ်။ https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/getting-started-guide/ https://fullcirclemagazine.org/libreoffice-special-editions/ https://fullcirclemagazine.org/2015/08/08/libreoffice-golden-anniversary-special-edition/ ၂) […]